लामो दूरीका यातायात र आन्तरिक उडान असोज ५ गतेदेखि खुल्ने कि असोज १ गतेदेखि? - Nepal Factcheck
लामो दूरीका यातायात र आन्तरिक उडान असोज ५ गतेदेखि खुल्ने कि असोज १ गतेदेखि?
सरकारले लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात र आन्तरिक उडान कहिलेदेखि खुला गर्ने निर्णय गरेको भन्ने विषयमा फरक फरक समाचार आएका छन्। सरकारी सञ्चार माध्यमहरु गोरखापत्र र नेपाल टेलिभिजनले असोज ५ गते खुला हुने समाचार भदौ २९ गते दिएका थिए भने भदौ ३० गतेका समाचारमा असोज १ गतेदेखि खुला हुने भनिएको छ। बीबीसी नेपाली सेवाको अनलाइनदेखि नेपालका अन्य निजी मिडियाहरुले पनि असोज ५ गतेदेखि खुला हुने समाचार दिएका थिए।
गोरखापत्रमा दुई जनाको बाइलाइनमा लेखिएको समाचारमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्याललाई उद्‍धृत गरिएको छ। समाचार यस्तो छ-
त्यसैगरी सरकारी टिभी च्यानल नेपाल टेलिभिजनले भदौ २९ गते ‘असोज ५ गतेदेखि लामो दुरीका यातायात र आन्तरिक उडान खुला गर्ने सरकारको निर्णय’ शीर्षकको समाचार अनलाइनमा राख्यो। यहाँ क्लिक गरी हेर्नुस् समाचार।
तर भदौ ३० गते भने नेपाल टेलिभजनको अनलाइनमा ‘यातायात र हवाइ उडान पर्सि १ गतेदेखि सञ्चालनमा आउने’ शीर्षकमा समाचार आयो।
निजी अनलाइन मिडियाहरुमा के थियो?
– कान्तिपुर : असोज ५ गतेदेखि लामो दूरीको यातायात र आन्तरिक उडान खुला
समाचारमा स्रोतका रुपमा पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईलाई उद्‍धृत गरिएको छ। (पत्रिकामा नाम उल्लेख छैन, अनलाइनमा मात्र नाम छ)
– उज्यालो अनलाइन : लामो दुरीका यातायात र आन्तरिक हवाई उडान असोज ५ गतेदेखि सञ्चालन हुने
यो समाचारमा कसले जानकारी दिएको स्रोत उल्लेख छैन।
– अनलाइनखबर : अनलाइनखबरले भदौ २९ गते दुई वटा मितिसहित समाचार राखेको थियो। सुरुमा लामो दुरीको यातायात र आन्तरिक हवाई उडान असोज ७ गतेबाट खुला गर्ने निर्णय शीर्षकमा समाचार थियो। यसमा नाम उल्लेख नभएका एक मन्त्रीले जानकारी दिएको स्रोत उद्‍धृत गरिएको थियो। तर पछि फेरि उक्त समाचारलाई सम्पादन गरी लामो दुरीको यातायात र आन्तरिक हवाई उडान असोज ५ गतेबाट खुला गर्ने निर्णय शीर्षक बनाइएको थियो।
–सेतोपाटी : असोज ५ गतेदेखि हवाई उडान र सार्वजनिक यातायात सञ्चालन हुने
यसमा नाम उल्लेख नभएका एक मन्त्रीले जानकारी दिएको भनी स्रोत उल्लेख गरिएको छ।
– नेपाललाइभ : असोज ५ गतेदेखि हवाई उडान र सार्वजनिक यातायात संचालन गर्ने सरकारको निर्णय
नाम उल्लेख नभएका एक मन्त्रीलाई स्रोतको रुपमा प्रयोग गरिएको छ।
– पहिलोपोस्ट : लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात र आन्तरिक हवाइ उडान असोज ५ गतेबाट चल्ने
यो समाचारमा पनि नाम उल्लेख नभएका एक मन्त्रीले जानकारी दिएको लेखिएको छ।
– र, बेलायती रेडियो बीबीसी नेपाली सेवाको अनलाइनमा पनि- नाम उल्लेख नगरी समाचारमा लेखिएको छ- कोरोनाभाइरस महामारीका कारण बन्द आन्तरिक हवाई सेवा असोज ५ गतेदेखि खोल्ने निर्णय सरकारले गरेको छ।
सरकारी निर्णयको आधिकारिक जानकारी सरकारका प्रवक्ताबाट आउने हो। प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे जानकारी दिन भदौ ३० मा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा असोज १ गतेदेखि लामो दूरीका सवारी साधनहरु र आन्तरिक हवाई उडान खुला गरेको बताएका छन्। हेर्नुस् भिडियो
निश्कर्ष : असोज ५ गतेदेखि लामो दूरीका यातायात र आन्तरिक उडान खुला गर्ने सरकारको निर्णय भनेर सरकारी मिडियामै आएका खबर र विभिन्न निजी अनलाइन मिडियाहरुमा आएको खबर सरकारकै प्रवक्ताको भनाईबाट गलत ठहरिन्छ। यी सेवाहरु असोज ५ नभएर असोज १ गतेदेखि सञ्चालन हुन लागेको हो।